“Anaga xiligan ujeedkeenu ma ahan koobka horyaalka Premier League”…Pep Guardiola – Gool FM
(Manchester) 11 Agoosto 2018. Macalinka reer Spain ee Pep Guardiola ayaa iska diiday inuu diirada saari doono ku guuleysiga koobka Premier League xili ciyaareedka cusub.
Pep Guardiola ayaa sheegay in muhiimadiisa koowaad ay tahay sida uu diirada ku saari lahaa kulan kasta iyo sida ay Sky Blues kusoo bandhigi lahayd qaab ciyaareed wanaagsan, kadibna uu fiiriyo waxa dhici doona dhamaadka xilli ciyaareedka.
Manchester City ayaa kulankeeda ugu horeeya horyaalka Premier League ee xili ciyaareedka cusub waxay la ciyaari doontaa bari oo Axad ah kooxda reer London ee Arsenal.
“Hadafkeenu waa inaan guuleysano kulanka Axada, kadib kulanka Huddersfield, ugu dambeyna waxaan arki doonaa qaab ciyaareedkeena, waxaan diirada saari doonaan sidaas oo kaliya”.
“Inaan guuleysano kulan kasta waxay ina siineysaa dhiiragalin dheeri ah, aad ayaan u faraxsaneen xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, oo maxaa naga hor istaagaya inaan ku celino guulaha xili ciyaareedkii hore”.
“Haddii aan si fiican u ciyaarno waxaan fursad u heli doonaa inaan markale ku guuleysano horyaalka Premier League, hadii aanan sidaas sameynin waxaan ku dhameysan doonaa qaab aan wanaagsaneen, waxaan aaminsanahay inaan heysano koox aad u fiican”.
Valverde oo ka hadlay kulanka Spanish Super Cup iyo suurtagalnimada uu Dembélé kaga dhaqaaqi karo Barcelona